Ibhedi yeBunk kwiMountain Lodge SKI HUT GORICA
Mavrovi Anovi, Municipality of Mavrovo and Rostusha, UMntla Makedoni
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguDimitar
Sinikezela ngendawo yokuhlala yabantu abanomdla, abakhweli, abakhweli beebhayisekile, abanyuki kunye nabanyuki bentaba.
I-WIFI yasimahla ••24-7 amanzi ashushu••Ikhitshi yeeNdwendwe•• Umlilo osemva kwendlu••Ipaki ye-Slackline••i-cinema yangaphandle yasehlotyeni••Iimephu kunye neengcebiso zokukhwela intaba••iqonga leYoga••amatikiti entlawulo yokungena kwiPaki yeSizwe••Izothutho zasekuhlaleni & nomhlaba•• Ukhenketho olukhokelwa yintaba &ukuhamba ngebhayisekile••ukuqasha ibhayisekile••
Igumbi lokulala elinendawo yokulala eyi-6 elinendawo yokulala echibini. Igumbi lokuphumla kunye ne-lake-view terrace yokupholisa. Ikhitshi yeendwendwe. Ihlathi elingasemva elinendawo yomlilo kunye nepaki ye-slackline kunye nendawo yeyoga.
Sinikezela ngokuhlala okuzolileyo nokuzolileyo, ngamanye amaxesha kwabelwana nabanye abantu bangaphandle
iibhedi ezikhweleneyo eziyi-3
4.40 · Izimvo eziyi-11
Sizinze kwindawo yokuhlala ezolileyo/yolonwabo lwempelaveki. Kukho iivenkile zegrosari zasekhaya, iithaveni kunye neendawo zokutyela ezikufutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Dimitar
Umzuzu ngamnye ofuna ulwazi oluthile, isikhokelo, inkonzo okanye uncedo ngento ethile uzive ukhululekile ukubuza. Ungaphinda uqhagamshelane nam nge-IM (viber, whatsapp, telegraph) kwi +38971555185 nangaliphi na ixesha.